Yemahara Ebook: Uri Kutamba iyo Manhamba Game? | Martech Zone
Isu takanyora nezve manzwiro atakaitwa nawo Wese Munhu Zvemagariro kukurudzira vashandi vako kuti vasimudzire zita rako munharaunda. Mushure mekuita iyo posvo, timu imomo yakasvika ikandibvunzurudza maererano nezvandakamboona pasocial media. Vakatora mhedzisiro yeiyo bvunzurudzo ndokuvandudza ebook rakanaka raunogona kurodha pasi kubva kune yavo saiti.
Haina kunaka nekuti mukombe wangu uri pabutiro:)… ivo vakangoita basa rakakura pakubata izwi rangu uye nekumisikidza nhaurirano kuita runyorwa rwemibvunzo nemhinduro yangu. Ini ndinopindura iyi mibvunzo:
Chii chako vatengi vari kutsvaga?
Iwe unofunga sei kuti ndeipi nzira yaunotarisa pairi?
Iko kublogi kwachinja uye zvinoenderana sei nehurongwa hwese?
Hunhu hunotsanangurwa sei mune aya masvikiro?
Zvakaita sei kukura nharaunda yako wega?
Ndeipi mamiriro azvino enhau
Iwe unowana sei iwe anotarisira mutengi akatarisana neshanduko pamusoro pemigwagwa uye kufarira?
Ndezvipi zvaunotarisa pane rinotevera gore? Ndedzipi shanduko huru dzaunoona pasirese?
Iri ebook kuona kwakanaka mune zvandichataura nezvazvo paSocial Media Kushambadzira Nyika mukupera kwaKurume. Ini ndinotenda zvakasimba kuti nzvimbo dzakawandisa, nyanzvi uye kunyange mapuratifomu anotarisana nekutora kana zvasvika pasocial media. Yemagariro midhiya inoshamisa mukana hausi kutora, iko kuchengetedza. Makambani ane mukana wekuteerera uye kuvaka hukama nevatengi vavo varipo.
Ebook iri rakaverengwa zvishoma ... haripinde mune chero mhando yehunyanzvi kufambiswa kwemabasa kana kunongedzera kune chero mhinduro kana kusangana kuchakubatsira Iyo ingori dhairekitori huru yekuwana maonero angu - akagadzirwa kubva pamakore ekushanda nevatengi vedu - mukudhinda. Kutenda ku Wese Munhu Zvemagariro yemukana wekuwana izvi kunze uko! Vari kuburitsa akateedzana emabooks kubva kune vatungamiriri vashoma muindasitiri iyi - kubva kuvanhu vakaita saSandy Carter, Amy Tennison, Jason Falls, Chris Brogan, Joe Pulizzi, Mari Smith… nevamwe.
Dhawunirodha iyo Ebook Izvozvi!
Tags: Amy TennisonChris Brogandouglas karreBookmunhu wese munharaundajasoni anowaJoe PulizziMari SmithSandy Carter
Yemagariro Media Kushambadzira Kutadza